Alahadin’ny Zanaka am-pielezana amin’ny 23 janvier 2011 – FJKM Ambavahadimitafo Alahadin’ny Zanaka am-pielezana amin’ny 23 janvier 2011 |
Alahadin’ny Zanaka am-pielezana amin’ny 23 janvier 2011
Publié le 16 janvier 2011 à 08:01
» Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesoa mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo Aminy » (Ef. 2. 10)
Ny Mpitandrina mivady sy ny fiangonana dia miantso ny zanany any am-pielezana sy ny mpianakavin’ny finoana hiara-hisaotra sy hidera an’Andriamanitra ny Alahady 23 janoary 2011 amin’ny 09 ora maraina.
Amin’io fotoana io no ifampiarahabahantsika tratry ny taona vaovao 2011 sy hananganana ny komity fanorenana.
Aoka hiomana amin’ny Fanasana Masina ny mpandray ny Fanasan’ny Tompo.
Hanafana ny fotoana ny Taninketsa, ny AMA,ny Antoko Mpihira Zokiny.
Tongava maro ary aoka hifampilaza ho Voninahitr’Andriamanitra.